आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण घरको प्रयोग र सौन्दर्य एजेन्सीको लागि आईपल कपाल हटाउने उपकरण बीच के भिन्नता छ? - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण कम्पनी सीमित
आईपल कपाल हटाउने उपकरण घर प्रयोग र सौन्दर्य एजेन्सीको लागि आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण बीच के भिन्नता छ?
समय: 2019-10-28 हिट्स: 161
घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउने उपकरण को सामान्य शैलीहरू स्क्यान कोड गन प्रकार वा हेअर ड्रायर प्रकार हो, जुन आकारमा सानो छ र बोक्नको लागि सुविधाजनक छ। सौन्दर्य एजेन्सीको आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्राय: फ्लोर-स्ट्यान्डि is हुन्छ, यसलाई ठाडो कपाल हटाउने उपकरण पनि भनिन्छ।
२, कपाल हटाउने सिद्धान्त
घरको आईपेल एपिलेटरमा आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग हुन्छ र सौन्दर्य एजेन्सीको पनि त्यहि सिद्धान्त हुन्छ।
कपाल र कपाल कण संरचना melanin मा समृद्ध छ, र यसको रंग वरपरको छाला भन्दा धेरै गहिरो छ। जब भेदक लेजर छालामा प्रवेश गर्दछ, छालामा प्रकाश छरितो हुन्छ। छरिएको प्रकाशले कपालको फोलिकुलमा कार्य गर्दछ र छनौटपूर्वक कपालको फोलिकुलमा मेलानिनले अवशोषित गर्दछ। मेलानिनले प्रकाश उर्जा अवशोषित गर्दछ र यसलाई तातो ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ, जसले कपालको फोलिकलको तापक्रम बढाउँदछ ... जब यो एक निश्चित तहमा पुग्छ, यसको संरचना अपरिवर्तनीय क्षतिमा पर्ने हुन्छ, र कपालका फोलिक्लाहरू चिन्ताजनक र atrophied हुन्छन् र अब बढ्न सक्दैनन्, यसरी कपाल हटाउने प्रभाव हासिल।
,, कपाल हटाउने उर्जा
घरको शक्ति कपाल हटाउने उपकरण र सौन्दर्य आईपल कपाल हटाउने उपकरण फरक प्रयोग गर्दछ। सौन्दर्य एजेन्सीको आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण सामान्यतया -500००--600०० वाटसम्म पुग्न सक्छ, र हाम्रो घर प्रयोग कपाल हटाउने उपकरण २०--20० वाट छ। फरक शक्ति को कारण, ती दुई बीचको उर्जा भिन्न छ। ऊर्जाले कपाल हटाउने प्रभाव र गहनता निर्धारित गर्दछ। त्यसकारण, सौन्दर्य एजेन्सीको आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको कपाल हटाउने प्रभाव घर प्रयोगको भन्दा राम्रो र बलियो हुनेछ। यद्यपि, घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण सुन्दर शरीरको कपाल हटाउने उपकरण भन्दा सुरक्षित छ।
,, कपाल हटाउने समय
किनकि सौन्दर्य एजेन्सीको आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको कपाल हटाउने प्रभाव घरको प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणको भन्दा राम्रो छ, तदनुसार, सौन्दर्य एजेन्सीको आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणले घर आईपल भन्दा कपाल हटाउन कम समय लिन्छ। कपाल हटाउने उपकरण। तर त्यहाँ धेरै फरक हुँदैन, र बहु ​​उपचार आवश्यक हुनेछ।
घर आईपल कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि सामान्य मूल्य दायरा २०० देखि ,200,००० युआन सम्म हुन्छ, यद्यपि त्यहाँ अन्य मूल्यहरू पनि छन्, प्राय: यो दायरामा छन्। सुन्दर एजेन्सीको आईपीएल कपाल हटाउने उपकरणमा सामान्यतया दशौं हजारको मूल्य हुन्छ।
, 6, अन्य
घर आईपल एपिलेटरको तरंगदैर्ध्य दायरा सामान्यतया -००-500०० एनएम हुन्छ, र सौन्दर्य एजेन्सीको आईपल एपिलेटर सामान्यतया -700००-१२०० एनएमको तरंगदैर्ध्य दायरा हुन्छ। चाहे यो घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउने उपकरण हो वा सौन्दर्य मेसिनको लागि फोटोसिन्थेटिक कपाल हटाउने उपकरण, यसले कपाल हटाए पछि कपालको वृद्धिमा निश्चित निषेधात्मक प्रभाव पार्दछ। र किनभने विभिन्न तरंगदैर्ध्यले बिभिन्न छाला तहहरूमा कार्य गर्दछ, तरंगदैर्ध्य जो परिमार्जित गर्न सकिन्छ पनि प्राप्त गरियो, र छालाको एक्नेको प्रभाव पनि प्राप्त भयो।
अघिल्लो: तपाइँ लेजर ipl कपाल हटाउनु अघि के जान्नु पर्छ
अर्को: के होम आईपीएल कपाल हटाउने मेसिन स्थायी हो? होम आईपीएल कपाल हटाउन अन्तिम कति लामो हुन्छ?